Wednesday July 08, 2020 - 16:47:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Itoobiya waxaa sare usii kacaya colaadda ahliga ah ee dalkaas ka qaraxday isbuucii lasoo dhaafay, sideed maalmood kadib bilaabashadii rabashada dhiigga badan ku daatay ayaa lasoo warinayaa in dagaallo lagu hoobtay ay dhaceen.
Wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo culus ay gobollada iyo magaalada caasimadda ah ku dhaxmarayaan ciidamada melleteriga oo ay kaabayaan kuwa booliska iyo dad ka caraysan dhibaatada lagu hayo siyaasiyiinta qowmiyadda Oromada.
isgaarsiinta oo hawada ka maqan iyo aaladda internetka oo go'an ayaa sabab ka dhigtay in warbaahinta caalamiga ah heli wayso xaqiiqda waxa ka socda dalka gudihiisa.
Telefeshinka ayaa marmarka qaar si kooban usheegaya goobaha iska hor'imaadyo ka socdaan halka wakaaladda wararka ay ku gaabsanayso in ciidamada ammaanka ay ladagaallamayaan wax ay ugu yeertay qaswadayaal dibadda lagasoo abaabulay.
Shalay waxay aheyd maalin kale oo howlgalo raaf ah ay ka dhaceen magaalada addis ababa iyo degmooyin katirsan gobolka Oromiya, ilo wareedyo lagasoo xigtay ragga firfircoon ee udhuun daloola dhacdooyinka itoobiya waxay sheegayaan in dagaallada ugu culus ay ka socdaan hareeraha magaalooyinka Hawaasa iyo Dddis Ababa halkaas oo ah meelo aad looga taageero jawhar maxamed.
Ciidamo isugu jiro boolis iyo melleteri ayaa la sheegay in weerar dhabagal ah ay kala kulmeen maleeshiyaad katirsan kooxaha mucaaradka dhanka koonfur galbeed ee addis ababa gaar ahaan xaafadda warshadaha caanka ku ah.
Mucaaradka dibad joogga ah waxay sheegayaan in waxa socda ay yihiin gummaad waxayna baaqyo udireen wax ay ugu yeereen beesha caalamka oo daneeya arrimaha itoobiya.
Khasaaraha Dhimashada oo 300 ku dhow
khasaaraha nafeed ee ka dhashay rabshadaha socda ayaa boqolaal ah dowladda xabashida Itoobiya ayaa markale isbuucan gudihiisa waxay soo bandhigtay qeyb yar oo kamid ah dadka ku dhintay rabshadaha.
Mustafa Qaadir oo ah taliyaha ciidamada booliska gobolka Oromiya oo xukuumada Addis Ababa ay uwakiilatay ka hadalka dhibaatada jirta ayaa telefeshinka rasmiga ah ka akhriyay warbixin ku saabsan tirakoobka rasmiga ah ee dhankooda wuxuu sheegay in dhimashada guud ay tahay 239 ruux, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in 2015 qof oo dadka dhintay kamid ah ay yihiin shacab sidoo kale dadka dhintay waxaa kamid ah 5 kamid ah dagaalyahanada hubaysan iyo 9 katirsan ciidamada booliska.
Sidoo kale ciidamada booliska addis ababa ayaa xaqiijiyay in shalay oo kaliya ay dhinteen 10 ruux macaddeyn in dadka dhintay ay kamid yihiin ciidamo boolis iyo inkale.
Taliska Abiy Axmed ayaa lagu eedaynayaa in uu geysanayo gabood fallo ka dhan ah dadka aan hubaysnayn, illaa iyo hadda xog xaqiiq ah lagama hayo waxa Itoobiya ka socda oo aan ka aheyn warbixinta halka dhinac ah ee ka imaanaya xukuumadda.